Ciidanka Xoogga Oo Isku Furay Waddooyin Ay Al-Shabaab Go’doomiyeen Sannado Badan – STAR FM SOMALIA
Ciidanka Xoogga dalka gaar ahaan kuwa qeybta 60-aad ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay howlgal waddo furis ah ka sameeyeen degmooyin ka tirsan Gobolada Baay iyo Bakool ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ciidamada Xoogga iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa isku furay waddooyinka isku xira degmooyinka Waajid, Tiyeeglow iyo Qansaxdheere oo Gobolada Baay iyo Bakool ka kala tirsan, halkaas oo ay Go’doomiyeen dagaalamayaasha Al-shabaab.
Howlgalkaan ayaa waxaa hoggaaminayay Abaanduulaha Ururka 45-aad, guutada 8-aad, qeybta 60-aad ee Xoogga dalka Maxamed Nuur Gurey, wuxuuna sheegay in Maanta ay suura-gashay inay isku furan waddooyin go’doonsanaa muddo toban sanno ah.
Saraakiisha Ciidamada Ururka 45-aad, guutada 8-aad, qeybta 60-aad ayaa sheegay in Al-shabaab laga saaray goobihii ay ka joogeen jidadka isku furay ee ka kala tirsan Waajid, Tiyeeglow iyo Qansaxdheere ee Gobolada Baay iyo Bakool.
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa muddo badan Go’doon ku haaya degmada Waajib, waxaana dhowr jeer oo horey duleedka Magaaladaas lagu gubay gaari dameero Raashin u siday Ganacsato, sidoo kalena duleedka Waajid ay ka dhaceen dagaal khasaaro dhaliyey.